ရျောနယျဒိုရဲ့ big fan လေးတဈယောကျ မနညေ့က ခွစှေမျးတှပွေခဲ့တယျ . . .
အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ ဖလား ခွစေဈပှဲစဉျအဖွဈ မနညေ့က အနျဒိုရာအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့ပွီး (၄−ဝ) ဂိုး နဲ့ ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့ပါတယျ။
ပှဲမစတငျမီကတညျးက ဂိုးပွတျနိုငျမယျလို့ အလေးပေးခံရတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ပှဲအပွီးမှာ (၄)ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ အနျဒိုရာအသငျးရဲ့ ကစားသမားတှရေဲ့ခံစဈကောငျးမှနျမှုကွောငျ့ သှငျးဂိုးတှအေလှယျတကူ ရခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။
ဒီပှဲမှာ ယူနိုကျတကျ ကှငျးလယျကစားသမား လငျဂတျက ပှဲခြိနျပွညျ့ ပါဝငျ ကစားခဲ့ပွီး ထူးရှယျ ခွစှေမျးတှကေို ပွသသှားခဲ့ပါတယျ။
မိနဈ (၂၀) ဝနျးကငျြက ဂိုးသမားနဲ့ တဈယောကျခငျြးအတှေ့ မှာ ဂိုးသမားကို ကြျောပွီးသှငျးယူခဲ့တဲ့ ဂိုးသာ လူကြှံမနခေဲ့ဘူးဆိုရငျ ဒီပှဲမှာ လငျဂတျက hat-trick ရယူသှားမယျ့သူဖွဈခဲ့မှာပါ။
လငျဂတျဟာ ဒီပှဲမှာ ကိုယျတိုငျ (၂) ဂိုးသှငျးပွီး အသငျးဖျော ဆာကာ ဂိုးသှငျးနိုငျဖို့ အတှကျလညျး ဖနျတီးမှု တဈကွိမျပွုလုပျပေးနိုငျခဲ့ပါသေးတယျ။
ပထမပိုငျး (၁၈)မိနဈမှာ လငျဂတျဟာ အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ အဖှငျ့ဂိုးသှငျးပွီးခြိနျမှာ ရျောနယျဒိုစတိုငျရယျ သူ့ရဲ့ စတိုငျရယျကို ရောနှောပွီး အောငျပှဲခံခဲ့ပါတယျ။
ပှဲအပွီးမှာတော့ သူဟာ ပှဲစဉျရဲ့အကောငျးဆုံးကစားသမား Player Of The Match အဖွဈ ရှေးခယျြခံခဲ့ရပါတယျ။
ယူနိုကျတကျမှာ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့ပြောကျဆုံးနတေဲ့ လငျဂတျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ယူရို (၂၀၂၀) ပွိုငျပှဲမှာလညျး နိုငျငံအသငျးကနေ ခနျြလှပျခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
နှရောသီဈေးကှကျမှာ အသငျးမှာ ထှကျခှာဖို့ အလားအလာမြားခဲ့ပမေယျ့ နညျးပွဆိုးလျရှားက လငျဂတျကို ဆကျထိနျးထားဖို့ ဆန်ဒရှိခဲ့ပွီး ကစားသမား ကိုယျတိုငျကလညျး
အသငျးခဈြတဲ့စိတျ အပွငျ သူ့ရဲ့ အိုငျဒေါ ပါ အသငျးဆီကို ပွနျရောကျလာခဲ့တာကွောငျ့ မစှနျခှာနိုငျဖွဈနပွေီး ဒီရာသီမှာ ပှဲထှကျခှငျ့ တဈနရောစာအတှကျ တိုကျပှဲဝငျဖို့ ဆုံးဖွတျထားတာဖွဈပါတယျ။
ပှဲအပွီး BelN Sportsနဲ့ အငျတာဗြူး ပွုလုပျတဲ့ အခြိနျမှာလညျး လငျဂတျကသူ့ရဲ့ ပထမဂိုးသှငျးပွီးခြိနျက အောငျပှဲခံခဲ့တာက ရျောနယျဒိုကို “ကွိုဆိုတဲ့ လကျဆောငျ´´ ပေးခဲ့တာပါဆိုပွီး ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
သူက မဆေငျမောငျ့ကိုလညျး အငျဒိုရာနဲ့ မကစားခငျကတညျးက သူဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ရငျ သူ့ရဲ့စတိုငျနဲ့ ရျောနယျဒိုရဲ့စတိုငျကို ရောပွီးအောငျပှဲခံမယျလို့ ကွိုတငျပွောခဲ့သလို ပှဲမှာလညျး အမှနျတကယျခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပွောတဲ့အတိုငျးဖွဈအောငျလုပျနိုငျခဲ့တဲ့ သူဖွဈခဲ့ပါတယျ။
လငျဂတျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဒုတိယရာသီဝကျက ဝကျဈဟမျးမှာ အငှားကစားခဲ့ပွီးနောကျ ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အင်ျဂလနျ အသငျးမှာ ပွနျလညျရှေးခယျြခံခဲ့ရသူဖွဈပမေယျ့ ယူရို ၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲမှာတော့ ရှေးခယျြမခံခဲ့ရပါဘူး။
ဒီရာသီမှာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ ၁၀မိနဈကြျောသာ ကစားခှငျ့ရထားပမေယျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲတှအေတှကျတော့ ပွနျလညျရှေးခယျြခံခဲ့ရပါတယျ။
အငျဒိုရာနဲ့ ပှဲမှာ လငျဂတျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကေတော့
ဂိုးကနျသှငျးမှု (၄) ကွိမျ
ဂိုးဖနျတီးမှု (၁) ကွိမျ
ဘောလုံး ရှငျးထုတျနိုငျမှု (၃/၄)
ရော်နယ်ဒိုရဲ့ big fan လေးတစ်ယောက် မနေ့ညက ခြေစွမ်းတွေပြခဲ့တယ် . . .
အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ ဖလား ခြေစစ်ပွဲစဉ်အဖြစ် မနေ့ညက အန်ဒိုရာအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့ပြီး (၄−ဝ) ဂိုး နဲ့ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ပွဲမစတင်မီကတည်းက ဂိုးပြတ်နိုင်မယ်လို့ အလေးပေးခံရတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ပွဲအပြီးမှာ (၄)ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် အန်ဒိုရာအသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ခံစစ်ကောင်းမွန်မှုကြောင့် သွင်းဂိုးတွေအလွယ်တကူ ရခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီပွဲမှာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်က ပွဲချိန်ပြည့် ပါဝင် ကစားခဲ့ပြီး ထူးရှယ် ခြေစွမ်းတွေကို ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ မိနစ် (၂၀) ဝန်းကျင်က ဂိုးသမားနဲ့ တစ်ယောက်ချင်းအတွေ့ မှာ ဂိုးသမားကို ကျော်ပြီးသွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးသာ လူကျွံမနေခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီပွဲမှာ လင်ဂတ်က hat-trick ရယူသွားမယ့်သူဖြစ်ခဲ့မှာပါ။
လင်ဂတ်ဟာ ဒီပွဲမှာ ကိုယ်တိုင် (၂) ဂိုးသွင်းပြီး အသင်းဖော် ဆာကာ ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း ဖန်တီးမှု တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ပထမပိုင်း (၁၈)မိနစ်မှာ လင်ဂတ်ဟာ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် အဖွင့်ဂိုးသွင်းပြီးချိန်မှာ ရော်နယ်ဒိုစတိုင်ရယ် သူ့ရဲ့ စတိုင်ရယ်ကို ရောနှောပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာတော့ သူဟာ ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမား Player Of The Match အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ယူနိုက်တက်မှာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လင်ဂတ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရို (၂၀၂၀) ပြိုင်ပွဲမှာလည်း နိုင်ငံအသင်းကနေ ချန်လှပ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီဈေးကွက်မှာ အသင်းမှာ ထွက်ခွာဖို့ အလားအလာများခဲ့ပေမယ့် နည်းပြဆိုးလ်ရှားက လင်ဂတ်ကို ဆက်ထိန်းထားဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ပြီး ကစားသမား ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသင်းချစ်တဲ့စိတ် အပြင် သူ့ရဲ့ အိုင်ဒေါ ပါ အသင်းဆီကို ပြန်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့် မစွန်ခွာနိုင်ဖြစ်နေပြီး ဒီရာသီမှာ ပွဲထွက်ခွင့် တစ်နေရာစာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲအပြီး BelN Sportsနဲ့ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း လင်ဂတ်ကသူ့ရဲ့ ပထမဂိုးသွင်းပြီးချိန်က အောင်ပွဲခံခဲ့တာက ရော်နယ်ဒိုကို “ကြိုဆိုတဲ့ လက်ဆောင်´´ ပေးခဲ့တာပါဆိုပြီး ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ သူက မေဆင်မောင့်ကိုလည်း အင်ဒိုရာနဲ့ မကစားခင်ကတည်းက သူဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ရင် သူ့ရဲ့စတိုင်နဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့စတိုင်ကို ရောပြီးအောင်ပွဲခံမယ်လို့ ကြိုတင်ပြောခဲ့သလို ပွဲမှာလည်း အမှန်တကယ်ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လင်ဂတ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယရာသီဝက်က ဝက်စ်ဟမ်းမှာ အငှားကစားခဲ့ပြီးနောက် ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန် အသင်းမှာ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပေမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲမှာတော့ ရွေးချယ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒီရာသီမှာ ယူနိုက်တက် အတွက် ၁၀မိနစ်ကျော်သာ ကစားခွင့်ရထားပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲတွေအတွက်တော့ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အင်ဒိုရာနဲ့ ပွဲမှာ လင်ဂတ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကတော့
ဂိုးကန်သွင်းမှု (၄) ကြိမ်
ဂိုးဖန်တီးမှု (၁) ကြိမ်
ဘောလုံး ရှင်းထုတ်နိုင်မှု (၃/၄)
ဖခငျဖွဈသူ ဘကျခမျရဲ့ခွရောလိုကျနငျးနိုငျဖို့ ပရျောဖကျရှငျဘောလုံးလောကထဲဝငျရောကျလာပွီဖွဈတဲ့ ရိုမီရို